Qaraxyo Ka Kala Dhacay Degmooyinka Kaaraan Iyo Hurwaa. – Bogga Calamada.com
Qaraxyo Ka Kala Dhacay Degmooyinka Kaaraan Iyo Hurwaa.
Qaraxyo kala duwan ayaa lagu weerarayo goobo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada waxeyna qaraxyadu ka kala dhaceen degmooyinka Kaaraan iyo Hilwaa ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa Kowaad waxaa lagu weeraray Hooyga uu degan yahay gudoomiye ku xigeenka maamulka dowlada Farmaajo ugu magacaaban degmada Hilwaa,iyadoona la xaqiijiyay in Bamka uu ku qarxay gudaha Hooyga sarkaalkaasi.
Si rasmi ah looma xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi lagu weeraray hooyg gudoomiye ku xigeenka maamulka Ridada degmada Hilwaa kaasi oo sidoo kale dhowr maalmood ka hor ka badbaaday isku day dil kadib markii qeybo ka mid ah degmada Hurwaa qarax miino lagula beegsaday gaari uu la socday.
Qaraxa Labaad oo Bam ah waxaa lagu weeraray goob ay ku qayilayeen maleeshiyaatka dowlada oo ku taala xaafada Suuqa Xoolaha ee isla degmada Hilwaaa,Bamkaasi ayaa sababay khasaara nafeet oo soo gaartay maleeshiyaatka lala beegsaday.
Qaraxa Saddex-aad oo isna Bam gacmeed ahaa waxaa lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan Murtadiinta oo ku taala degmada Kaaraan taasi oo sidoo kale sababtay khasaara kala duwan oo soo gaartay Murtadiinta lagu weeraray Bamkaasi.
Qaraxyadan ayaa kusoo aadaya xilli Afartan Iyo Sideedii Saac ee u dambeysay gudaha magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dhowr weerar oo lala beegsaday maleeshiyaatka dowlada Ridada kuwaasi oo ay u dambeeyeen Labo dil oo ka kala dhacay gudaha iyo duleedka Muqdisho kuwaasi oo loo kala geystay Labo askari oo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada waxaana Labadaasi askari laga kala qaatay Hubkii ay siteen.
Sidoo kale weerar qarax Miino ah ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan maamulka Kooxda Ridada ugu magacaaban Magaalada Muqdisho qaraxaasi oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mid ah degmada Wardhiigley ee Wilaayada Banaadir.